१७औं टुबोर्ग ईमेज अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक (सूचीसहित)
Published: September 11, 2015 17:18 PM
काठमाडौं, भदौ २५ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको महाउत्सव ‘टुबोर्ग ईमेज अवार्डको १७औं संस्करण आगामी असोज महिनामा आयोजना हुँदैछ ।ईमेज च्यानलले १७औं टुबोर्ग इमेज अवार्डका लागि शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ ।च्यानलले...
Published: September 10, 2015 17:24 PM
काठमाडौं, भदौ २४ । भारत र चीनबीच दार्चुलास्थित नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै नाका खोल्ने सम्झौताको विरोध भैरहेको बेला जनगायक रायन श्रेष्ठले ‘लिम्पियाधुरा हाम्रै हो’ भन्ने सन्देशसहितको एल्बम सार्वजनिक गरेका छन् ।विहीबार राजधानीमा आयोजित समारोहमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले रायनका दुईओटा गीति एल्बम ‘जहाँबाट सुरु भयो’...
यसरी हुँदैछ सौन्दर्यकर्मीको भिडन्त
Published: September 10, 2015 12:59 PM
काठमाडौं, भदौ २४ । अहिले सौन्दर्य प्रतियोगिताको लहड नै चलेको छ । यसै मेसोमा थपिएका छन्–व्युटिशियन आइकन । यसमा सौन्दर्य व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । अहिले व्युटिशियन आइकनका लागि तीस जना सौन्दर्यकर्मी भिडिरहेका छन् । उनीहरुलाई ग्रुमिङ सेसनमा राखिएको छ । यसमा सौन्दर्यकर्मीहरुले आफ्नो आत्मविश्वास,...
Published: September 8, 2015 13:24 PM
मुम्बई, भदौ २२ । बलिउडमा ख्याती कमाएका नायक सलमान खानले आफ्नो जीवन सामान्य रहेको बताएका छन् । अरुले सोचेजस्तो आफ्नो जीवन धेरै विलासी नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘म प्रसिद्धिलाई त्यति महत्व दिन्नँ, फिल्मी दुनियाँमा देखिने मेरो छवि र व्यक्तिगत जीवनमा धेरै फरक छ ।’ उनी...
Published: September 7, 2015 09:25 AM
काठमाडौं, भदौ २१ । नेपाली ऐतिहासिक चलचित्र ‘कीर्तिपुर’ द लिजेन्ड अफ कीर्तिलक्ष्मीको विशेष प्रदर्शनी आउँदो असोज ८ र ९ गते पोखरामा हुने भएको छ । चलचित्रलाई पोखराको गुरु चेला, द करियर प्वाइन्टले संयोजन गरी प्रदर्शनी तयारी थालेको हो । पोखरास्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल, गैरापाटनमा कीर्तिपुर प्रदर्शनी...
Published: September 6, 2015 17:56 PM
मुम्बई, भदौ २० । गत शुक्रबारदेखि प्रदर्शन भएको बलिउड चलचित्र ‘वेलकम ब्याक’ ले दुई दिनमै ३१ करोड रुपैयाँ (भारु) भन्दा बढीको कारोबार गरेको छ ।शुक्रबारको तुलनामा शनिबार सो चलचित्रले बढी आम्दानी गरेको जनाइएको छ । अनीस बज्मीको यस चलचित्रले पहिलो दिन शुक्रबार १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो...
Published: September 3, 2015 09:20 AM
मुम्बई, भदौ १७ । बलिउडमा शाहरुख खान, सलमान खानलाई अहिले पनि चर्चित र सफल नायकका रुपमा लिइन्छ । बक्स अफिसुमा यी दुबैले अभिनय गरेका चलचित्रले राम्रो व्यापार गरिरहेको पाइन्छ । उमेरले पाँच दशक लागेका यी नायकले बलिउडमा आफ्नो अभिनय यात्रा थाल्दा अहिलेका चर्चित कतिपय नायिका कोक्रामै खेल्दै गरेका थिए भने कतिपयको त जन्मसमेत...
‘हामी उठ्ने छौं’अभियानः जसले विश्वलाई जागरुक गराउँदैछ(भिडियो हेर्नुहोस)
Published: September 2, 2015 10:10 AM
काठमाडौं, भदौ १६ । दुई साता अघि काठमाडौंमा एउटा भब्य समारोह आयोजना गरेर एउटा अभियान सुरु भयो । ‘हामी उठ्ने छौं’ अभियान । यही अभियानलाई विश्वब्यापी बनाउन तयार भएको गीतको म्यूजिक भिडियोले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा उत्साहित गराउन थालेको छ । विभिन्न...
भारतीय संचारमाध्यममा ‘चंखे शंखे पंखे’ को चर्चा
Published: August 31, 2015 10:43 AM
काठमाडौं, भदौं १४ । आगामी असोज ८ गतेदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘चंखे शंखे पंखे’ ले भारतीय संचारमाध्यमहरुमा पनि प्रचार थालेको छ । चलचित्रले नेपाली मिडियामा मात्र नभई दर्जनौं भारतीय अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समेत बिज्ञापन मार्फत ब्यापक प्रचार प्रसार गरेको छ । भारतका...
नेताले भाषण गर्ने मञ्चमा कलाकारको यस्तो प्रस्तुती(भिडियो सहित)
Published: August 30, 2015 12:29 PM
काठमाडौं, भदौ १३ । गाईजात्राको अवसर पारेर हांस्य कलाकारहरुले पनि काठमाडौंमा समसामयिक तथा राजनीतिक विषयमा व्यंङ्ग्यात्मक प्रस्तुती गरेका छन् । सामाजिक विकृति तथा विसंगतीलाई हांस्यव्यंग्यमार्फत कलाकारहरुले गाइजात्रामा बेला प्रस्तुती गर्ने गर्दछन् । रिपोर्टर्स क्लबले गरेको कायक्रममा...
‘पप सम्राट’ ओमविक्रम विष्टको जिन्दगीको पीडादायी पाटो (भिडियोसहित)
Published: August 29, 2015 14:10 PM
काठमाडौं, भदौ १२ । करिब चार दशक नेपाली सांगीतिक यात्रा पार गरिसकेका ‘पप सम्राट’भनेर चिनिने गायक ओमविक्रम विष्ट अमेरिका बस्छन् । उनको बाहिरी जीवन जति सुखद देखिन्छ भित्री उत्तिनै पीडादायी छ ।तीन छोरी र एक छोराका बाबु बनिसकेका उनको विवाह दीर्घकालीन हुन नसकेको दुखेसो छ । प्रेम विवाह गरेका उनले विवाहको महत्व नबुझ्दा सफल नभएको बताएका...
यादव खरेललाई राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मान
Published: August 28, 2015 17:46 PM
काठमाडौं, भदौ ११ । वरिष्ठ गीतकार यादव खरेल राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मानबाट सम्मानित भएका छन् ।गीतकार संघ नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले खरेललाई एक लाख रुपैयाँ राशीको राष्ट्रिय स्रष्टा सम्मानबाट सम्मानित गरेका हुन् ।कार्यक्रममा गीतकार श्याम तमोटलाई विशेष सम्मान गरिएको...
संजय दत्तलाई फेरि जेलबाट छुट्टी
Published: August 26, 2015 11:41 AM
मुम्बई, भदौ ९ । बलिउड अभिनेता संजय दत्तले फेरि जेलबाट छुट्टी पाएका छन् । उनलाई एक महिनाका लागि छुट्टी दिइएको हो । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार संजयले गत जुन महिना मै छुट्टीका लागि निवेदन दिएका थिए । छोरीको स्वास्थ्योपचारको कारण दर्शाउँदै उनले छुट्टी मागेका हुन् । हालै उनलाई ३० दिनका लागि छुट्टी दिने निर्णय भएको हो...
ओस्कार पुरस्कार जित्ने इच्छा छ: सुनिल थापा
Published: August 24, 2015 10:40 AM
काठमाडौं, भदौ ७ । सुनिल थापा नेपाली चलचित्रमा खलपात्रका रुपमा सर्वाधिक रुपमा रुचाइएका कलाकार हुन । चार दशक यता देखि कलाकारिता क्षेत्रमा सक्रिय भएका उनले भविष्यमा ओस्कार पुरस्कार जित्ने दावी गरेका छन । कलाकारिता क्षेत्रमा ‘राते काइला’, ‘सेरसिहं’ उपनामले चिनिने उनी बाल्यकालदेखि पढाइमा कमजोर...
Published: August 23, 2015 12:39 PM
काठमाडौं, भदौ ६ । बेलायतमा रहेका नेपालीहरुको संस्था ‘ब्रिटिस गोर्खा नेपाली परिषद’ले लण्डनमा भब्य समारोहका बीच ‘गोर्खा कल्चरल नाइट’ आयोजना गर्ने भएको छ । परिषदको शनिबार बसेको बैठकले केही महिना भित्रै नेपालमा स्टार कलाकारहरुको उपस्थितिमा भव्य कार्यक्रम गर्न लागेको छ । ...